Hlanganisa iAdwords zikaGoogle kunye neNtengiso kunye neBizible Analytics | Martech Zone
Hlanganisa iAdwords zikaGoogle kunye neNtengiso kunye neBizible Analytics
NgoMvulo, Novemba 17, 2014 NgoMgqibelo, nge-4 kaFebruwari ngo-2017 Douglas Karr
Iyabonakala ikuvumela ukuba uhlalutye ukusebenza kweAdwords yakho ngokusekwe kuguquko kunokuba ucofe, ukuvumela ukuba usebenze ngokukodwa kunye ne-Salesforce yokulinganisa ukusebenza ngokusekwe kwiphulo, iqela lentengiso, umxholo wentengiso, kunye nenqanaba lamagama aphambili. Ukusukela Iyabonakala isebenza ngokulandela umkhankaso wephulo kuGoogle Analytics, unokulandela umkhondo wamajelo amaninzi kukhangelo, kwezentlalo, ezihlawulelweyo, i-imeyile kunye namanye amaphulo.
Iimpawu eziphambili zidweliswe kwiBizible site
I-AdWords ROI -Ikuvumela ukuba ugrade nzulu kwiAdWords ROI kwiphulo, iqela lentengiso, umxholo wentengiso, kunye nenqanaba lamagama aphambili, ukuze ukwazi ukulinganisa kunye nokwenza izigqibo zokuphucula ukukhangela ngokusekwe kwingeniso.
Ukulandela umkhondo wamajelo amaninzi -Iingxelo zesitayile se-UTMs kuGoogle Analytics ngokuthe ngqo kwi-Salesforce, eyenza ukuvavanya nokwenza ngcono NALIPHI na iphulo lokuthengisa kwi-Intanethi nge-ROI ngokulula.
Imbali yeNkokheli yeNkokeli -Xhobisa iqela lakho lokuthengisa ngolwazi lokuthengisa abaludingayo lokuvala amathuba amaninzi. Jonga indlela izikhokelo zakho ezinxibelelana ngayo nendawo yakho ngaphambi kokuba ziguqulwe, kunye nazo zonke iinkcukacha ezifanelekileyo zokuthengisa.
Iingxelo zesiko -Ukuthengisa kwi-Intanethi kuya kusiba nzima ngakumbi kwaye kwahlulwe. Yakha iingxelo zesitokhwe ezinokusetyenzwa, kunye neengxelo zesiko phantse elingenamda ukuze zilingane ishishini lakho.
Ukudityaniswa okuninzi -KuSalesforce uhlaziyo kwangoko kwintengiso ezenzekelayo, iinkqubo zolawulo lomxholo kunye nokuLungiselela ngokuLungileyo uvavanyo lwe-A / B. Iipesenti ezingama-60 ze Iyabonakala abathengi basebenzisa iMarketo, Hubspot, Act-On, okanye i-Eloqua. IBizible ikwakhona unqakrazo olunye kunye neWordPress, iJoomla, okanye iDrupal.
Ungayifumana Efanelekileyo kwi-Saleforce AppExchange.
tags: vavanyoUmthetho-Onetshintshibizibleiinkqubo zolawulo lokuqukethwedrupaleloquagoogle adwordshubspotJoomlaukuzenzekela ngokuzenzekelayouphawungokufanelekileyoukuthengisaindawo yokuthengisaintengiso ppcWordPress
Ngaba ishishini lakho lenza nayiphi na kwezi mpazamo kwimidiya yoluntu?
Nika amandla ukuThengiswa kweNtlalo kwindawo yakho ye-Ecommerce ngeGetSocial